ဒီပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးသွင်းနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ
စီးရီးအေမှာ နိုင်ပွဲပြန်ရှာဖွေမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်
27 Oct 2018 . 1:00 PM
ဒီနေ့(စနေည)မှာ ကစားမယ့် စီးရီးအေပွဲစဉ်(၁၀)မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ အမ်ပိုလီအသင်းကွင်းမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာပါ။ စီးရီးအေပွဲစဉ်(၉)မှာ နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအနေနဲ့ ဒီပွဲမှာတော့ နိုင်ပွဲပြန်ရှာဖွေရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမ်ပိုလီ – ဂျူဗင်တပ်စ် (စနေည ၁၀း၃၀ နာရီ )
အမ်ပိုလီမှာ အိမ်ကွင်းဆိုတဲ့ အရာပဲရှိပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ယှဉ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါ။ စီးရီးအေ(၈)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ထားပြီး ခံစစ်ပိုင်းကလည်း အားနည်းနေတဲ့ အမ်ပိုလီအသင်းအနေနဲ့ ဒီပွဲမှာ ဂိုးပြတ်မရှုံးအောင်သာ အဓိကထား ကစားလာမယ့် ပုံစံမှာရှိနေပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကတော့ နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ စီးရီးအေပွဲစဉ်မှာ နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့တာကြောင့် အမှတ်ပေးဇယားဒုတိယနေရာက နာပိုလီနဲ့ ရမှတ်(၄)ပဲ ကွာပါတော့တယ်။ ဒီအနေအထားကြောင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အနေနဲ့ နိုင်ပွဲမဖြစ်မနေပြန်ရှာဖို့လိုပါတယ်။ အမ်ပိုလီဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ပေမယ့် ဒီပွဲမှာပိတ်ကစားလာနိုင်တဲ့ အပြင် ဂျူဗင်တပ်စ်ဟာလည်း ပွဲဆက်တွေများနေတာကြောင့် ပွဲပန်းမှု ဒဏ်ကိုခံရနိုင်ပြီး ဂိုးပြတ်နိုင်ဖို့ကတော့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ် အနိုင်သေချာတဲ့ ပွဲဖြစ်ပြီး (၁ – ၂ ) ၊ ( ၀ – ၂ ) ရလဒ်မျိုးတွေထွက်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
အမ်ပိုလီ – ဂျူဗင်တပ်စ် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုနောက်ဆုံး(၅)ကြိမ်
Photo: Evening Standard , Juventus Twitter , HotSports!
စီးရီးအမှော နိုငျပှဲပွနျရှာဖှမေယျ့ ဂြူဗငျတပျဈ
ဒီနေ့(စနညေ)မှာ ကစားမယျ့ စီးရီးအပှေဲစဉျ(၁၀)မှာတော့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ အမျပိုလီအသငျးကှငျးမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျကစားရမှာပါ။ စီးရီးအပှေဲစဉျ(၉)မှာ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးခဲ့တဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအနနေဲ့ ဒီပှဲမှာတော့ နိုငျပှဲပွနျရှာဖှရေတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။
အမျပိုလီ – ဂြူဗငျတပျဈ (စနညေ ၁၀း၃၀ နာရီ )
အမျပိုလီမှာ အိမျကှငျးဆိုတဲ့ အရာပဲရှိပွီး ဂြူဗငျတပျဈကို ယှဉျဖို့ဆိုတာ ဘယျလိုမှမဖွဈနိုငျတဲ့အရာပါ။ စီးရီးအေ(၈)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျထားပွီး ခံစဈပိုငျးကလညျး အားနညျးနတေဲ့ အမျပိုလီအသငျးအနနေဲ့ ဒီပှဲမှာ ဂိုးပွတျမရှုံးအောငျသာ အဓိကထား ကစားလာမယျ့ ပုံစံမှာရှိနပေါတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကတော့ နောကျဆုံးကစားထားတဲ့ စီးရီးအပှေဲစဉျမှာ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးခဲ့တာကွောငျ့ အမှတျပေးဇယားဒုတိယနရောက နာပိုလီနဲ့ ရမှတျ(၄)ပဲ ကှာပါတော့တယျ။ ဒီအနအေထားကွောငျ့ ဂြူဗငျတပျဈအနနေဲ့ နိုငျပှဲမဖွဈမနပွေနျရှာဖို့လိုပါတယျ။ အမျပိုလီဟာ ဂြူဗငျတပျဈရဲ့ ပွိုငျဘကျမဟုတျပမေယျ့ ဒီပှဲမှာပိတျကစားလာနိုငျတဲ့ အပွငျ ဂြူဗငျတပျဈဟာလညျး ပှဲဆကျတှမြေားနတောကွောငျ့ ပှဲပနျးမှု ဒဏျကိုခံရနိုငျပွီး ဂိုးပွတျနိုငျဖို့ကတော့ ခဲယဉျးပါလိမျ့မယျ။ ဂြူဗငျတပျဈ အနိုငျသခြောတဲ့ ပှဲဖွဈပွီး (၁ – ၂ ) ၊ ( ၀ – ၂ ) ရလဒျမြိုးတှထှေကျပျေါနိုငျပါတယျ။
အမျပိုလီ – ဂြူဗငျတပျဈ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုနောကျဆုံး(၅)ကွိမျ
by Ko Kyue . 8 mins ago